Fanosoran'ny sandany fanosoran'ny sandany China Manufacturer
Description:Sandam-bary marevaka matevina,Fanosoran'ny sandany fanosoran'ny sandany,Lamba vita amin'ny giro madio madio
Home > Products > Pelatanan-jiro > Fanosoran&#39;ny sandany fanosoran&#39;ny sandany
Inona ny fantsonan'ny ranomandry Glass?
Kitapo fanadiovana vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly vita amin'ny rongony vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly izay mamorona tontolon'ny rano madio sy mamiratra. Ireo kofehy fitaratra dia ampiharina amin'ny tontolon'ny fampiasana tsindry ambany. Ity dingana ity dia manala ny loko sy ny harafesina sy ny vanja amin'ny metaly isan-karazany, avy amin'ny fiara, kamiao, fitaovana, kitapo maotera, lohan-tsofina ary tsipika. Amin'ny fampiasana ny fomba famafazana labiera dia azo atao ny manadio ny faritra tsy misy simba. Ny kavina dia misy karazany maro. Ny kely kokoa ny kofehy fitaratra, ny mibontsina ny tendrony, ny kôbôrera lehibe dia mamokatra fingotra kokoa.
Sandam-bary marevaka matevina
Moa ve rakotra ranomainty vita amin'ny gorodona ho an'ny tontolo iainana?
Ny fandoroana labiera dia tsy dia mifanaraka loatra amin'ny fiaraha-monina sy ny tontolo iainana. Ity fomba fanadiovana metaly ity dia fomba iray azo ekena rehefa voafehy tsara. Ny kofehy fitaratra ampiasaina amin'io dingana io dia natao avy amin'ny tsy misy fidiovana, soda toy ny fitaratra, izay tsy misy silica tsy vita fa vita amin'ny baolina talohan'ny baolina. Azo averina in-30 avo heny ny kofehy fitaratra.
Chiye Sandblasting Inona no tombony amin'ny fampiasana fantson-jiro Glass?
Ny famarotana labiera vita amin'ny glaogy dia dingana mahomby ampiasaina amin'ny famerenana amin'ny famokarana automotive. Ny famarotana labiera dia mamokatra loko marevaka sy mamiratra kokoa noho ny angilanina boribory. Tsy misy fiovam-po amin'ny metaly. Kitapo misy ravina vita amin'ny rongony dia tsy mamela ny loto sy ny sisa tavela. Ity dingana ity dia manala ny hadisoana rehetra. Ho afaka hahita ny tsimokaretina rehetra ianao, ny tsipika, ny lozi-pifamoivoizana, ary ny tsipika rehetra amin'ny taratasy fasika. Ny famarotana labiera vita amin'ny gasy dia afaka manatsara ny fanoherana amin'ny fihoaram-pe
Aiza no ampiasain'ny Glass Beasting?
Ny fanamboarana labozia dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny alimo, vy tsy misy tanany, varahina, vy, varahina, titanium, volafotsy sterlao, varahina, metaly, fitaratra, plastika ary rubber. Azo ampiasaina amin'ny fikolokoloana ny fiara sy ny kamiao izy io. Ny fanamboarana labozia vita amin'ny glasy koa dia fomba fanadiovana mahomby amin'ny fitaovana, kitapo maotera, loha sy entona. Ny fanamboarana labiera dia vidin'ny vidiny ambany ary azo ampiasaina amin'ny sehatra fanangonana, anisan'izany: ny ampahany manokana amin'ny ordinatera sy ny ampahany amin'ny moto.
Ohatrinona ny vidin'ny Glass Beast?
Ny vidin'ny Glass Bead Blasting dia miovaova eo amin'ny tetikasa ary voafaritra amin'ny karazana sy ny haben'ny tetikasa. Mifandraisa amin'ny Coatings mahasalama amin'ny fifaninanana mba hahazoana ny vidin'ny tetikasa Glass Beasting Blasting.
1. Ho an'ny faritra afovoan'ny lasy, manala ny fihenjanana sy mampitombo ny herin'ny reraka, ary mampihena ny fahasosorana sy ny akanjo.
2. Ny sanding mandavo, loko, ankoatra ny fametrahana karbaona, ankoatra ny fanodinana ny marika.
3. Ny fitaovana tsy misy fefy vy dia manadio ny fanadiovana sy ny fanesorana ratra amin'ny tara-pahazavana, sns
4. Tapa-kofehy vita amin'ny tapa-damba fanadiovana
5. Esory ny fingotra vita amin'ny fingotra.
Sandam-bary marevaka matevina Fanosoran'ny sandany fanosoran'ny sandany Lamba vita amin'ny giro madio madio Pikantsary marevaka matevina Sandam-be matevina Fiarovam-bovoka matevina Vola marevaka avo loko matevina Hira felam-boninkazo marevaka marevaka